आफन्त गुमाउनेको पीडा : ‘आँखैअघि आमा र बहिनी बगे’ Archives - Nepal Japan
नेपाली समय : 04:37:31
जापानी समय : 07:52:31
Tag: आफन्त गुमाउनेको पीडा : ‘आँखैअघि आमा र बहिनी बगे’
आफन्त गुमाउनेको पीडा : ‘आँखैअघि आमा र बहिनी बगे’
Posted on August 16, 2017 by Sandeep Bhattarai
एकैपटक असह्य पीडाले सताउँदा मान्छे रुन पनि सक्दो रहेनछ ! मनमा गाँठो परेको वेदना आँसु भएर पोखिन पनि समय लाग्दोरहेछ! १७ वर्षे राजकुमार घोर्सानेका लागि पछिल्ला चार दिन यस्तै उकुसमुकुसपूर्ण रहे।
थाहा छैन, कलिलो मनमा परेको गहिरो चोट कसरी पुरिन्छ ! न राम्ररी बोल्नै सकेका छन्, न डाँको छाडेर रुन नै।शनिबार बिहान कनकाईको बाढीले आमा घनमाया र बहिनी कमलालाई एकैसाथ बगाएको कहालीलाग्दो दृश्यका एकमात्र साक्षी उनै हुन् । बगेको केही घन्टापछि आमाको शव फेला परेपछि उनी किरियामा बसेका छन् । उनका बाबुलगायत छिमेकी बहिनीको ‘शव’ खोज्न दिनहुँ हिँडिरहेका छन् ।
उनका बुबा रोजगारीको सिलसिलामा लामो समयदेखि भारतको गुहावटीमा बस्दै आएका छन् । घरमा हजुरआमा, दुई बहिनी, आमा र उनीमात्रै थिए । अघिल्लो साँझ मात्रै ठूलोबुबाले हजुरआमा र सानी बहिनीलाई आफ्नो घर लगेका थिए । घरमा कमला, राजकुमार र आमामात्रै थिए ।
बिर्तामोडको कनकाई कलेजमा उतै डेरा बसेर व्यवस्थापन संकायमा कक्षा ११ पढिरहेका राजकुमार सधैं शुक्रबार घर आउँथे र शनिबार साँझ फर्कन्थे । यसपटक उनी बिहीबारै घर पुगेका थिए । उनका छिमेकी दाइले खोलामा धेरै ठूलो बाढी आएको खबर मोबाइलमा पठाएपछि उनी कलेज जानै सकेनन्, हान्निएर घर पुगे । लगातारको झरीले कतै निस्किन दिएन । घरैमा आमा र बहिनीसँग टिभी हेर्दै बसे उनी । शनिबार बिहान एक बजे राजकुमार एक्कासि चिच्याए, ‘मम्मी, खोला घरैमा आइपुगेछ, भागौं ।’ ‘के भन्छ यो’, आत्तिँदै उठेकी आमा पनि कहालिइन्, ‘मेरी बास्सै, खोलै पो आएछ त !’
बाढीग्रस्त क्षेत्रमा प्राथमिकताका साथ राहत सामग्रीको ढुवानी
Posted in पत्रपत्रिकाTagged आफन्त गुमाउनेको पीडा : ‘आँखैअघि आमा र बहिनी बगे’